Kucoin ပလက်ဖောင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | Learn ဘယ်လိုကုန်သွယ်ရေးတွင် Kucoin ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း - က ISO
cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာအအောင်မြင်ဆုံးချိန်းတစ်ခုမှာ KuCoin ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်: ၎င်း၏ဌာနချုပ်ဟောင်ကောင်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်ချိန်းနောက်ကွယ်မှ blockchain နိူးခြင်းနှင့်တရားဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။
"Highly အကြံပြု KuCoin ပလက်ဖောင်း"
အခုတော့ KuCoin သွားရောက်ကြည့်ရှု
KuCoina"ကို cryptocurrency-to-cryptocurrency" အခြေခံပေါ်မှာလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကူညီပံ့ပိုးမထားဘူး Fiat ဒင်္ဂါးပြား။ အဆိုပါအိတ်ချိန်းလုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်အရောင်းအများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးရည်ရွယ်ထားနှင့်ကုန်သည်များကမ်းလှမ်းဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ကျယ်ပြန့်အစုစုကိုအခြား Exchange များထံမှထွက်ရပ်။
ထို့ပြင် KuCoin အဖွဲ့သည်အလွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တန်ဖိုးရှိသောပရီမီယံအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစည်းရန်၎င်း၏စွမ်းရည်များအတွက်တန်ဖိုးထားသည်။
ကျနော်တို့သူကိုဘယ်လို KuCoin ချိန်းအလုပ်လုပ်တယ်ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာတွေ့မြင်:
အပေါ်စာရွက်စာတမ်း verification Kucoin
KuCoin ပလက်ဖောင်း: ဘယ်လိုငွေသွင်းနည်း
အဆိုပါ KuCoin ပလက်ဖောင်းကနေရန်ပုံငွေရုတ်သိမ်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တရုတ်ပလက်ဖောင်းများ၏ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ Opinions များနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကဘာတွေလဲ။
KuCoin တစ်ဦးမျှမျှတတပြည့်စုံဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းအစုစုနှင့်အတူဦးဆောင် crypto-to-crypto-based ချိန်းပလက်ဖောင်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တကယ်တော့, KuCoin ပေါ်မှာထိုကဲ့သို့သော Raiblocks နှင့် Dragonchain များ၏အကြိုက်အဖြစ် "နယ်ပယ်" cryptocurrencies ဖလှယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်တရားဝင် KuCoin ၏တည်ထောင်သူကုမ္ပဏီကကြေညာသည့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမစ်ရှင်ဟာပလက်ဖောင်းများ၏ကုန်သည်များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်ပစ္စည်းများ (cryptocurrencies) ၏အရောင်းအကောက်ချက်ချဖို့နဲ့လုံးဝလုံခြုံပြီးအဆင်ပြေလဲလှယ်န်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်နိုင်ချေများကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းပရီမီယံအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်ကာလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုလဲလှယ်ပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းရန်အဖွဲ့ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်း, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, KuCoin သငျသညျ Bitcoin ဖလှယ်နိုင်မည့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးချိန်းတ Ethereum, Neo အဖြစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါတယ် အမေရိကန် tethering, အောက်ပါနာမည်ဗတ္တိဇံကိုယင်း၏ cryptocurrency အပါအဝင်တခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး: KuCoin အစုရှယ်ယာ (KCS) ။
အဆိုပါလဲလှယ် 24 /7ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုပေးပိုသုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့်အခြားမည်သည့်လဲလှယ်ခြင်းထက်ပိုလွယ်ဖြစ်ဟုဆိုသည်။ တွင် အထူးသဖြင့်သူတို့ KCS လက္ခဏာသက်သေကိုင်ဆောင်သူနှင့်အတူကုန်သွယ်စရိတ်၏ 90% မျှဝေပါ။ ဒါဟာလက်ရှိ BTC, ETH ၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အတူ Neo အပါအဝင် 80 ကွဲပြားခြားနားသော cryptocurrencies, ထက်ပိုပြီးစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ယင်းအပေါ်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် Kucoin ချိန်း, သင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမည်:
အဆိုပါ KuCoin site ကိုချိတ်ဆက်ရယူသုံးပါ။
သင့်အီးမေးလ်နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းနှင့် Next ကိုနှိပ်ပါ။
သငျသညျအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်အကောင့်အတည်ပြုချက်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ်: ရုံစာတိုက်ပုံးထဲမှာလက်ခံရရှိသော link ကို click လုပ်ပါ။
Google က activation Two-Step Verification နှင့်အတူရှေ့ဆက်။
သငျသညျမှား password ကိုငါးကြိမ်ဝင်လျှင်, အကောင့် 24 နာရီသော့ခတ်ထားသည်။ သင်သည်သင်၏ password ကိုမအောက်မေ့ကြပါလျှင်ဒါ, လုံခြုံရေးစိစစ်အတည်ပြုစာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ဖို့မေ့နေ Password ကို tab ကို click လုပ်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ထဲသို့ဝင်သည် 2FA ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါနှင့် Submit button ကို click လုပ်ပါ။ သင့်အကောင့်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သင့်အချက်အလက်များနှင့်သိုက်ခိုးယူဖို့ဆိုကြိုးပမ်းမှုရှောင်ရှားရန်ဆိုတာသတိရပါ, KuCoin Google Authenticator ကိုအသုံးပြုသည်: ဤသည်သင်၏ KuCoin အကောင့်ကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်လုံခြုံရေးတစ်ဦးအပိုဆောင်းအဆင့်ထပ်ပြောသည်။
ယင်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှတ်ပုံတင်အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ account ကိုဝင်ရောက်ဖို့စကားဝှက်ကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်ကိုချိုးဖောက်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သုံးစွဲသူများက Google Authenticator ကိုအသုံးဖို့တောင်းနေကြသည်: အမှု၌စကားဝှက်ခိုးယူ၏, မစိုးရိမ်, သင်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် key ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Google ကအတည်ပြုရန်ကုဒ်ဖုန်းပေါ်မှာ Google Authenticator အားဖြင့်ထုတ်ပေးသည်အတည်ပြုကုဒ်တိုင်း 30 စက္ကန့်ကိုပြောင်းလဲနေသည်။ ဒီသည်တစ်ခါသာသုံးနိုင်တယ်။
ကမသင်မနေရမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်တောင်သင်မှတက်လက်မှတ်ထိုးသူလူတစ်ဦး၏ဝိသေသလက္ခဏာစစ်ဆေးနေနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် Kucoin ပလက်ဖောင်း: "။ KYC အတွက်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း" ကပဲ "အကောင့်" menu ကိုသွားပြီးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါကအရမ်းရိုးရှင်းစာရွက်စာတမ်းများ (ခိုင်လုံသောဝိသေသလက္ခဏာကဒ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များနှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) အပ်လုဒ်တင်ပြီးနှင့်အတူတူပင်များ၏တရားဝင်မှုစစ်ဆေးနေ၏ရလဒ်အဘို့စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။
"Highly အကြံပြု KuCoin"
အဆိုပါ KuCoin ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုအခြေခံကဏ္ဍများပါဝင်သည်: "စျေးကွက်များ" နှင့် "ပိုင်ဆိုင်မှု" အဖြစ် "ဆက်တင်များ", "သတင်း" "Explore" နှင့်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအစုစုကိုမှညီမျှသည်။ အဆိုပါ KuCoin ပလက်ဖောင်းကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်; တကယ်တော့ပြုလုပ်ပူဇော်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်:
, ညှိနှိုင်း depositing နှင့် KuCoin app သို့မဟုတ်တရားဝင် KuCoin က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာ၏အဆင်ပြေစေရန်။
ထို့အပြင် KuCoin ပလက်ဖောင်းရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ် menu ကိုသငျသညျကိုတိုက်ရိုက်အပ်ငွေဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပုဒ်မငွေထုတ်အဖြစ်တက်ကြွစွာအမိန့်များ၏သမိုင်းကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ KuCoin platform ပေါ်တွင်လည်ပတ်ဖို့ကအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ PC ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါသည်: ရုံချိန်း site ကိုမှတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။
တနည်းက Android နဲ့ iOS ကိုစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူစက်ကိုသုံးပြီးနှင့်ထောက်ခံ Operating System နဲ့လိုက်ဖက်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် app ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့သုံးပြီးချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်, ဒတ်ခ်ျ, တရုတ်, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, ရုရှား, စပိန်, ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမန်: KuCoin အများအပြားဘာသာပေါင်းစုံန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ တရုတ်ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်လျှောက်ထားသည့်အဖိုးအခ (ကော်မရှင်) အတွက်အမျှသူတို့ 0.1% ပါ၏ သို့သော်သူတို့ 0.05% အထိလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ခုနှစ်, KCS (KuCoin အစုရှယ်ယာ) ၏အပိုင်ထဲမှာသူတို့လျှော့ချမှုနှုန်းနှင့်အထူးထူးအပြားပြားအပိုဆုကြေးငွေအဖြစ်အထူးအစည်းအဝေးတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့နှင့် unrepeatable အခါသမယတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုမှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။
KuCoin အပေါ်သိုက်ကတော့ paid-in ကို cryptocurrencies အားဖြင့်တရားစွဲဆိုကွန်ယက်အခကြေးငွေ မှလွဲ. ယေဘုယျအားဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ 0.1% ကိုချိန်းတွင်ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းတို့အတွက်စွဲချက်တင်ထားသည်။ ဤသည်အများဆုံးကိုအခြားဖလှယ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်စျေးပေါဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် KuCoin စျေးကွက်အပေါ်စျေးအသက်သာဆုံးဖလှယ်မှုများ၏တဦးတည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ သို့သော်အများဆုံးထုတ်ယူထိုကဲ့သို့သော Neo အဖြစ်အနည်းငယ်ခြွင်းချက်, မှလွဲ. နှောဖြစ်ကြသည်။ ဆုတ်ခွာအခကြေးငွေတစ်ဦးချင်းစီ cryptocurrencies ပေါ်မူတည်သည်။
KuCoin အပေါ်ဆုကြေးငွေအထူးသဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းအမှုနှင့် 10 မိနစ်ထက်မပိုကြာရှည်သငျ့သညျ။ အသုံးပြုသူများသည်များစွာသောအခြားဖလှယ်ရေးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်မရှိတော့ဖြစ်သောအမည်မဖော်လိုတဲ့အဆင့်မြင့်ကနေအကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။
မှတ်ပုံတင်နှင့်ကုန်သွယ်ဘို့ကလိပ်စာပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရဲ့အထောက်အထားကဒ် upload လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်တို့တွင်အလိုအပ်ကြောင်းအားလုံးအီးမေးလ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုစလှေတျအီးမေးလ်အတည်ပြုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတည်ပြုရန်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ဒင်္ဂါးပြားများရောင်းချမှုနှင့်ဝယ်ယူရာမှရရှိလာတဲ့အပိုမရှိအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ။ ကိုယ်ကသာသင်စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့ခဲ့ကြပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့် hack လုပ်ခံထားရလျှင်အလားအလာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်နိုင်လျှင်နောက်တစ်ကြိမ်လော့ဂ်မှကူညီပေးသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်လည်းဖြစ်ပါတယ် တတ်နိုင်သမျှကျတ်တည်းခိုရန်ကျူးလွန်။
အရောင်းအမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာဖြစ်ကြ Blockchain-based ပမာဏ2မိနစ်အတွင်းအသုံးပြုသူအကောင့်ကဆက်ပြောသည်နေကြပြီး, ဆုကြေးငွေ 10 မိနစ်အတွင်းပျမ်းမျှအားဖြင့်လုပ်နေကြသည်။ client ရန်ပုံငွေများဘဏ်အားဖြင့်ပယ်လိုင်းသိုလှောင်မှုနဲ့သည် Periodic ပြန်လည်သုံးသပ် secure, ယုံကြည်မှု, multilayer encryption ကိုလည်းပါဝင်သည်သော KuCoin အစုစုအတွက်လုံခြုံဖြစ်ကြသည်။
အများအပြားအသစ်ကတိုကင် RedPulse (RPX) ကဲ့သို့မိမိတို့ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလဲလှယ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့အများအပြားအသစ်သောအသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့ KuCoin နှင့်အတူသာအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် KuCoin Fiat ငွေကြေး (စသည်တို့ကိုယူရို, ဒေါ်လာစျေး,) နဲ့ cryptocurrencies ဝယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပူဇော်မထားဘူး။
သင်တစ်ဦး cryptocurrency ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သင်ပထမဦးဆုံးကျနော်တို့အကြံပြု (မဝယ်ရမယ် Coinbase) ။ ထိုအခါသင်သည်အသစ်တစ်ခုလက္ခဏာသက်သေရရန်စတော့ရှယ်ယာလဲလှယ်ပေါ်တွင်သင်၏ cryptocurrencies ငွေသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်သင့်ရဲ့ KuCoin အကောင့်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့နောက်ကိုလိုက်ရန်အခြေခံအဆင့်များနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါအရင်းအမြစ် tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါက, ငွေထုတ် tab ကိုနှိပ်ပြီးလက္ခဏာသက်သေကို select ပြီးပုံမှန်လိပ်စာ add
သငျသညျနှစျခု-Factor authentication ကို activated ကြလျှင်, စနစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကုဒ်တောင်းပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခလုတ် "ကိုအတည်ပြု" အပြာရောင်ကိုနှိပ်ပါ။
အခြားမည်သည့်အိတ်ချိန်းပလက်ဖောင်းကဲ့သို့သင်တို့ကုန်သွယ်မှုနိုင်သည်ရုံဘယ်ဘက်ထိပ်ပေါ်ရှိ "စျေးကွက်" button ကို click နှင့်5Alt အကြွေစေ့၏တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်အတူအားလုံးအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့များအတွက်သင်ရွေးချယ်ရပေမည်။
အဆိုပါ crypto ၏အသီးအသီးအဘို့အသငျသညျမြောက်မြားစွာကတခြားဒင်္ဂါးပြားနှင့်အတူဆွေမျိုးအားလုံးအတှကျရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်; သက်ဆိုင်ရာငွေကြေး၏နာမတော်ကိုနှိပ်လိုက်ထားပြီးတစ်ကြိမ်ကဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးအစဉ်အလာများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်လမ်းအတွက်ကုန်သွယ်မှုမှဖြစ်နိုင်သမျှသည်အဘယ်မှာရှိသည် "အာကာသ" ဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါအကြွေစေ့ကိုရှေးခယျြခဲ့သတပြိုင်နက်, သင်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင် "Buy" button ကို click ရန်ဆန္ဒရှိပမာဏကိုအစီရင်ခံရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သငျသညျရောင်းဖို့သငျသညျမှာ "ရောင်းပါ" ခလုတ်ကိုရောင်း click လုပ်လိုသောအရေအတွက်သတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်ရပ်တန့်-ဆုံးရှုံးမှု option ကိုအသုံးပြုပြီးဝယ်ယူမှုနှင့်အရောင်းအလိုအလျောက်နိုင်ပါတယ်။
KuCoin သင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ကြီးမားသောနံပါတ်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုပေမယ့်အခိုက်မှာတစ်ဦး Fiat ငွေကြေးနှင့်အတူဝယ်ယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါ KuCoin ချိန်းတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ် cryptocurrencies ဝယ်ဖို့ကအွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်စသည်တို့ကို Bitcoin, Ethereum သို့မဟုတ် Litecoin, ဖလှယ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
KuCoin နောက်ကွယ်မှကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံနှင့်ထူးခြားသောစွမ်းရည်များနှင့်အတူမြင့်မားလေးစားဖွယ်အဖွဲ့အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, အဲဒီမှာဖြစ်ပါသည်: ပလက်ဖောင်း၏တည်ထောင်သူ cryptocurrency စျေးကွက်အပေါ် 2011 ကတည်းကတက်ကြွနေတဲ့သိမြင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအိတ်ကိုရှိသည်ထင်ပါတယ်။
တရုတ်လဲလှယ်လည်းထိုကဲ့သို့သော WeChat, ကြေးနန်း, Twitter Facebook မှာအဖြစ်အဓိကလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးဖောက်သည်ထောက်ခံမှုဝန်ဆောင်မှုပွင့်လင်း 24 နာရီတစ်ရက်,7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်ပေးထားပါတယ်။
စရိတ်နှင့်ကော်မရှင်များ KuCoin အောက်ပါစီးပွားရေးအခြေအနေများသက်ဆိုင်:
ထရေးဒင်း: ဝင်ငွေရရှိမှုအပေါ် 0.1%,
ထုတ်ယူ: ငါတို့သည်ယူငွေကြေးအပေါ် မူတည်. သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုအခကြေးငွေကောက်ခံ။
နောက်ထပ် 70 အများစုငယ်များထက် KuCoin အပေါ်ကုန်သွယ်မှု Cryptocurrencies, ဒင်္ဂါးပြား KuCoin အပေါ်ကုန်သွယ်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကား, ဧဒုံ Pulse, Pay (TenX), RaiBlocks, Qlink နှင့်များစွာသောပိုပြီးပါဝင်သည်။ KuCoin အပေါ်ကုန်သွယ်အဆိုပါဒင်္ဂါးပြား၏အများစုမှာ Bitcoin သို့မဟုတ် Ethereum ဆန့်ကျင်ကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ဦးချင်းစီ Crypto လည်း Neo, USDT (tethering), KCS (KuCoin အစုရှယ်ယာ) နှင့် Bitcoin ငွေဆန့်ကျင်ကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ KuCoin အဖွဲ့အဆက်မပြတ်အသစ်ကဒင်္ဂါးပြားထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ဒါဟာထွန်းသစ်ဒင်္ဂါးပြားရဲ့ပထမဆုံးနဲ့တူအဓိကဖလှယ်မှုအပေါ်စာရင်းမခံရမီ KuCoin မှာတွေ့သမျှသောအဆန်းမဟုတ်ပါ Binance သို့မဟုတ် Bitfinex ။
KuCoin 1,000 ၏အဆုံးအားဖြင့် site ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော 2018 ဒင်္ဂါးပြားရှိသည်ဖို့လိုသည်။ KuCoin အပေါ်ကုန်သွယ်မှုကသင်သည် KuCoin မှ cryptocurrency အတွက်ခရက်ဒစ်ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ KuCoin Fiat ငွေကြေး (ယူရို, ဒေါ်လာစျေး etc) ဆန့်ကျင်ကုန်သွယ်မှုပူဇော်မထားဘူး။ သငျသညျ (ငါမှာတစ်နေရာရာတခြားထံမှ Bitcoin သို့မဟုတ် Ethereum ဝယ်ဖို့ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမရွေးချယ်မှုပြုပါရှိသည်ဟု Coinbase ) နှင့် KuCoin မှပေးပို့ပါ။
KuCoin အပေါ် cryptocurrencies ရောင်းချတဲ့အခါသင်နောက်တစ်ကြိမ်ရှိသည်တူညီတဲ့ပြဿနာ။ တနည်းကား, သင်သာ BTC, ETH, USDT, Neo နှင့် BCH ဆန့်ကျင်ပြန်ငွေကြေးရောင်းနိုင်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်ယူရိုထိုသို့ရောင်းချနှင့်ယူရိုသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်သို့ပြောင်းရွှေ့ရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာအခြားလဲလှယ်ဖို့ထပ်အကြွေးပေးပို့ဖို့ရှိသည်။
KuCoin KuCoin အစုရှယ်ယာ (KCS) လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency တီထွင်ခဲ့သည်။ KCS အဆိုပါ ERC20 စံနှင့်အတူလိုက်နာ Blockchain Ethereum သည်။ စျေးကွက်အပေါ် 200 သန်း KCS စုစုပေါင်းလက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်။
ထိုအခါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ငွေပေးငွေယူကြေးဝင်ငွေ 10% ကို အသုံးပြု. တိုကင်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလေးပုံတပုံကိုဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့နောက်ဆုံးမှာ 100 သန်းတို့ကစုစုပေါင်းရောင်းလိုအားလျှော့ချ, KCS ဖျက်ဆီးခံရ 100 သန်းစုစုပေါင်းရောက်ရှိသည်အထိထုတ်ယူဆက်လက်။ KCS တိုကင် BTC, ETH နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာမှတဆင့်စတော့အိတ်ချိန်းအပေါ်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဒင်္ဂါးပြား၏လုံခြုံရေးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်မပေးပါဘူး KuCoin ဒင်္ဂါးပြား၏သိုလှောင်မှု။ အဆိုပါအိတ်ချိန်းယခုအချိန်အထိခဲမဆိုပင်ကိုယ်မူလတန်ဖိုးများရှိပါတယ်, ဆဲအလွန်ငယ်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်သင်၏အကောင့်များအတွက် 2-factor authentication ကိုသက်ဝင်သင့်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးတစ်ဆယ်ဖလှယ်မှုများ၏တဦးတည်းဖြစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့စပွန်ဆာများနှင့်မက်လုံးပေးအစီအစဉ်များနှင့်အခြား features တွေသူတို့ကိုကြောင့်ကြီးထွားမောင်းကူညီပေးပါမည်။
တစ်ခုအဆင့်မြင့် Multi-အလွှာနဲ့ multi-စပျစ်သီးပြွတ်ဗိသုကာသုံးပြီးသောအခါဖလှယ်မှုဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ကအစတစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုနှစ်ခုနေရာများအနှံ့ပြန့်နှံ့သုံးစင်တာများနှင့်အတူဘေးဥပဒ်ကို-ကျရောက်နေတဲ့ဘဏ်-Level ယာယီနေရာချထားပေး။
KuCoin အသစ်ဖြန့်ချိစတော့အိတ်ချိန်းဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံးအဖြစ်ဝေးဘုံ cryptocurrencies စိုးရိမ်နေကြအဖြစ်မည်သည့်ငွေဖြစ်လွယ်ပြဿနာများရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ ဒါဟာတစ်စက္ကန့်ဒုတိယနှင့်2သန်းအလို့ငှာတောင်းဆိုမှုများနှုန်း 1 သန်းအလို့ငှာတောင်းဆိုမှုများကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းတဲ့ high-performance ကိုကုန်သွယ်အင်ဂျင်ပေးပါသည်။
၎င်း၏စနစ်ကလုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စံလွှဲပြောင်း encryption ကို protocol များကိုအသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ဟာဘဏ်လုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီလုံခြုံရေးနှင့် encryption ကိုပေးရည်ရွယ်ပါသည်။
အားသာချက်များစွာကုန်သွယ် KuCoin ပလက်ဖောင်းရှိပါတယ်: ဒါဟာအဆင့်မြင့်မြင့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တန်ဖိုးနည်းကုန်သွယ်မှုသည်နှင့်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်ကောင်းလှ၏။ သို့သျောလညျးသငျသညျ KuCoin အပေါ် cryptocurrency အတွက်ရိုးရာငွေကြေး (Fiat) ဖလှယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
KuCoin ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုဆုလာဘ်စနစ်ကယင်း၏အသုံးပြုသူများကကမ်းလှမ်းတဲ့အလားအလာ cryptocurrency လဲလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများ KCS တိုကင်တွေနဲ့ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။
Tags: kucoin အပေါ်ကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လို, kucoin သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို, legit kucoin ဖြစ်ပါတယ်, ဘေးကင်းလုံခြုံ kucoin ဖြစ်ပါတယ်, kucoin, app ကို kucoin, kucoin app ကိုပြန်လည်သုံးသပ်, kucoin ဆုကြေးငွေ, kucoin အကြွေစေ့, kucoin လဲလှယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, kucoin အခကြေးငွေ, kucoin ရဲ့ login, kucoin စျေးနှုန်း, kucoin ပြန်လည်သုံးသပ်, kucoin ကုန်သွယ်အခကြေးငွေ, kucoin ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, kucoin ဆုတ်ခွာအခကြေးငွေ, kucoin ဘာလဲ
အန်သိုနီလူစီ - အောက်တိုဘာလ 3, 2019 @ 07: 44
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်သူတို့၏ရန်ပုံငွေများကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံသောကုန်သည်များ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် bitcoin သို့မဟုတ် bitcoin သို့မဟုတ် forex သို့ပြန်သွားကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၀,၀၀၀ ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့သောသူတို့၏ဖောက်သည်များ၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်၊ အဆုံးမှာငါငါ့အလိုရှိသမျှပိုက်ဆံဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါငွေပြန်ဆယ်ယူနိုင်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးအေဂျင်စီတချို့နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုခြေလှမ်းလှမ်းဖို့ခြေလှမ်းတွေနဲ့လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တဲ့မစ္စတာရစ်ချတ် Ford ကိုမတွေ့မချင်းသူဟာငါပိုက်ဆံပြန်ရနိုင်အောင်ကူညီခဲ့တယ်။ မည်သည့်အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်အကောင့်မန်နေဂျာမှသင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောရန်ပုံငွေကိုသင်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပုံကိုအကူအညီတောင်းရန်အောက်ပါ Mr Richard အီးမေးလ်ကိုဆက်သွယ်ပါ ။EMAIL- Derrickglenn60 @ gmail ။ com
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြီးတွင်၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီးသည့်နောက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ငွေများကို binary option, bitcoin သို့မဟုတ် forex သို့ငွေပြန်ပို့ခြင်းမပြုတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၀,၀၀၀ ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် binary option ပွဲစားများအားကျွန်ုပ်၏ငွေထုတ်ယူမှုတောင်းဆိုမှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
Martin Carballal - နိုဝင်ဘာလ 28, 2019 @ 08: 22
EO.Trade ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုံ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု
Muris - ဒီဇင်ဘာလ 8, 2019 @ 18: 39
EO ၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်မှု, ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောကုန်သွယ်ရေး, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်မှု,
Eriksen - ဇန်နဝါရီလ 4, 2020 @ 20: 35
+ တိုင်အောင်တဆယ်လေးတစျခု =
Created: အောက်တိုဘာလ 30, 2018